Posted by zizawa ⋅ 01/11/2009	⋅6Comments
Posted by kom | 01/11/2009, 17:38 Reply to this comment	ပညာသင်ပြီးလို့ ဆင့်ပွား မျှဝေလာမဲ့ အကျိုးတွေကို လိုလိုလားလား ခံယူချင်ပါတယ်။ ပညာနဲ့တွေးတဲ့ အတွေး၊ ပညာနဲ့ရေးတဲ့ အရေး၊ ပညာနဲ့ သုံးသပ်တဲ့ ဆင်ခြင်မှု၊ ပညာနဲ့ စေတနာပေါင်းတဲ့ မျှဝေမှု စတာတွေပေါ့..။ ရင်းရကျိုး နပ်ဖို့ အားထုတ်မှာပဲလို့လဲ ယုံကြည်တယ်။
Posted by မိုးချိုသင်း | 02/11/2009, 05:23 Reply to this comment	Congratulation.. sis. You did it.🙂
Posted by K | 02/11/2009, 06:13 Reply to this comment	အင်း လမ်းခုလတ်မှာ ရပ်နေမိတယ်။
Posted by Rita | 02/11/2009, 14:40 Reply to this comment	တချို့ကလည်း ပညာဆိုတာ ဆုံးခန်းတိုင်အောင် မရှိဘူးတဲ့။ ကိုယ်တတ်တဲ့ ပညာကို တဆင့် ပြန်ဝေမျှ ပေးနိုင်ရင် အချိန်ခံရကျိုး သင်ရကျိုးနပ်တယ် လို့ ထင်ပါတယ်။ ကိုယ်တယောက်ထဲ မဟုတ်ဘဲ နီးစပ်သူများကပါ ပေးဆပ် ရတယ် ဆိုတာလည်း တကယ် မှန်ပါတယ်။
Posted by မီယာ | 02/11/2009, 22:40 Reply to this comment	ကျွန်တော့်အမြင်ပြောရရင်တော့….ပညာသင်နေကြတယ်ဆိုတာနေခေတ်ရေစီးကြောင်း အရပါ… သူများတကာ နိုင်ငံခြားဘွဲ့ လက်မှတ်တွေယူနေကြတဲ့/ ရှိနေကြတဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ်မှာဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်….အဲ့ ဒီအသိုင်းအ၀ိုင်းထဲမှာ ဘယ်လိုရပ်တည်ကြရမလဲ …. ဘယ်လောက်ကောင်းတဲ့ ပညာရေးပဲဖြစ်ပါစေ ….အဲ့ ဒီစနစ်ကပေးနိုင်တာက …. သီအိုရီနဲ့ သမိုင်းရဲ့ုပြန်လည်သုံးသပ်ချက်ပါပဲ ….. အဲ့ ဒါကြောင် ငွေကုန်..အချိန်ကုန်…လူပင်ပန်းရကြိုး နပ်မနပ်ဆိုတာ တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ စိုက်ထုတ်မှု ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်
Posted by minlatt | 07/11/2009, 12:49 Reply to this comment	LeaveaReply Cancel reply	Enter your comment here...